Uchwepheshe we-Semalt: Wena, Yebo, Wena! Ingabe Uyakwazi Ukuthi Ugaxekile Wokudlulisa Umoya Ungubani?
Ukudluliselwa kwe-Ghost noma ukudluliselwa kogaxekile kuyimoto engafanele ebonisa i-akhawunti yakho ye-Google Analytics. Kodwa-ke, uma ubheka ukuthi i-hits ivela kuphi, uzobona ukuthi ivela kuwebhusayithi yokudlulisela phambili futhi ukwandise izinga lakho lokunciphisa kakhulu. Njengamanje, kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko zokudluliswa kweghost ezithinta idatha ye-Google Analytics. Okokuqala, kukhona ama-spam bots kanye nabakwa-crawlers abakhombise amakhasi akho wewebhu bese benganaki amafayela e-robots.txt - lady luck mobile casino reviews. Uhlobo lwesibili yiDarodar, okungaziwa njengenqubo engekho emthethweni yokukhiqiza imoto. U-Ryan Johnson, Semalt uMenenja weNtuthuko Yekhasimende, uchaza ukuthi inkinga enkulu ukuthi ukuxhunyelwa kogaxekile okuvela emoyeni kuvela ezizindeni eziningi, eziningi zazo ziyizihloko ezindala futhi zifakwe kumawebhusayithi ngehora.
Umehluko phakathi kwe-spam bots kanye ne-ghost referrals yikhwalithi yethrafikhi. I-spam yokudlulisela i-ghost ithumela ithrafikhi kusuka kuzizinda ezintsha nezingaziwa, kepha akakaze avakashele amawebhusayithi akho. Esikhundleni salokho, bashiya imigwaqo yedijithali ethinta ama-akhawunti wakho we-Google Analytics futhi ukwandisa izinga lakho lokunciphisa. Bahlose ukulandelela amakhodi wakho we-Google Analytics, futhi ungawavimbela ngokudala izihlungi ku-akhawunti yakho. Ngale ndlela, uzokwazi ukumisa ugaxekile wokudluliselwa koghost ekubhubhiseni idatha yakho ye-analytics.
Ingabe i-spam yokudlulisela i-ghost ithinta i-SEO yami noma iwebhusayithi?
Kuphephile ukuphawula ukuthi i-spam yokudlulisela i-ghost ayithinti i-SEO yakho noma iwebhusayithi. Njengoba sesivele sichazile ukuthi empeleni akuvakashele iwebhusayithi yakho kodwa kubonise phezulu kubasebenzisi be-Google Analytics idatha..Nokho, yilokho okuthinta imibiko yakho yedatha kanye ne-analytics. Ugaxekile we-referrer wesiphambeko uhlasela indawo yakho usuku lonke futhi ubonisa ukufika ku-1 000 amahora ngamahora angu-24.
I-spam yokudlulisela i-ghost yenza izinto ezilandelayo kusayithi lakho:
Kwandisa kakhulu izinga lokunciphisa kwamakhasi akho ewebhu.
Kunganciphisa inani lezivakashi kubhulogi yakho noma kwisayithi.
Ihlaziya idatha yokudlulisela futhi yenza kube nzima kuwe ukubona ukuthi ithrafikhi iyinhloko noma cha.
Ivimbela Ukuguqulwa Kwezinhloso kanye nedatha yendawo, ukuthumela ukuvakashelwa okuningi okuvela eRussia.
Abakwa-spammers abathumelayo bathumela kanjani idatha kuma-akhawunti akho we-Google Analytics?
2. Bakha i-bots ezenzakalelayo ukuze babhale indawo yakho ye-website, befake abathumeleli futhi babonise ukuvakashelwa okuningi.
3. Bakha i-bots ethize ukuthumela idatha ngokuqondile ku-Google Analytics yakho futhi akubandakanyi izingosi zangempela zokudlulisa.
Indlela engcono kakhulu yokuvimbela i-spam yokudlulisela igaxekile ngokudala izihlungi noma ukuhlela ifayela lakho le-.htaccess. Ungakha izihlungi eziningi njengoba ufuna ukuvimbela ama-hits asolisayo ekubhubhiseni idatha yakho ye-Google Analytics.